ဘိန်းမုန့်ပူပူလေး | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
← ဒိုမီနို လုပ်နည်း
ဒီမုန့်လေးစားချင်လို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားနေတာ အမျိုးသားကလဲအရမ်းစားချင်နေပါတယ်၊ အိသက်က ဘိန်းမုန့်တော့သိပ်မကြိုက်ပါ။ ဒီမှာ မလွယ်တဲ့နေရာဆိုတော့ကြိုက်သွားပါပြီ။ ဒီနည်းလေးကို အိသက်အမေပေးတာပါ ။ သေသေချာချာကို မေးပြီးလုပ်လိုက်မှ ဘိန်းမုန်အရသာ စစ်စစ်လေးစားရပါတော့တယ်. yeast ကတော့ သူငယ်ချင်း ဂျူလိုင် ကထဲ့ကြည့်ခိုင်းလို့ပါ။ စားလို့တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ လွယ်လဲအလွန်လွယ်ပါတယ်။
– self raising flour (or ) wheat flour ၁ခွက်
-ဆော်ဒါ ၁ဇွန်း, yeast၁ဇွန်း (အချိုဇွန်း)
ဆန်မှုန့် နဲ့ self raising flour ကိုရေ ၂ခွက်-ဆော်ဒါ ၁ဇွန်းထဲ့ပြီးနယ်ထားပါ။ မုန့်သားပေါက်လာအောင်၃နာရီခန့်ထားထားပါ။
ထန်းညက်ကို ကြွက်မြီးတန်းအောင်ကျိုပါ။ ထန်းညက်ရေဆန်ချိန်ခွက်နဲ့ ၁ခွက်ခွဲ လိုပါတယ်။
ကျိုပြီးသားထန်းညက်ရေ ၊ yeast နဲ့ မုန့်နှစ်များရောပါ။ ရောစပ်ပြီး မုန့်ရည်အတွင်း လက်နှစ်ပြီးပြန်ထုတ်ရင် မုန့်ရည်အညှိလေးတင်တယ်ဆိုရုံ ကျဲကျဲဖျော်ရပါမယ်။ ငှက်ပျောသီးချေထဲ့ပြီး ခပ်နာနာ မွှေပါတယ်။ အမြှပ်အနယ်ငယ်ထရင် မုန့်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
အုန်းသီးဖတ်နဲ့ ဘိန်းစေ့များဖြူးပေးပါ။ ရန်ကုန်မှာတော့ မုန့်ကိုအပေါ်မီးများများ အောက်မီးနဲနဲ နဲဖုတ်တာပေါ့။ ဒီမှာတော့ မီးမျှင်းမျှင်းနဲ့ဒယ်ပေါ်တင်ပြီး မုန့်မှာအပေါက်လေးတွေဖြစ်လာရင် ဒယ်မျက်နှာပြင် ကိုထောပတ်ထပ်သုတ်ပြီး အောက်ဖတ်ကိုလှန်ပြီး အပူပေးပါ။ ၁မိနစ် ခန့်အပူပေးပြီးရင် ဘိန်းမုန့်မွှေးမွှေးလေးရပါပြီ။
27 comments on “ဘိန်းမုန့်ပူပူလေး”
29/06/2012 @ 12:54 am
Hi Ei Thet, please tell me how many pieces did you get from this, and how much jaggery you use. is it jaggery from burma? or can u use brown sugar instead. thank you for sharing this recipe. your husband is so lucky to haveawife like you making various burmese desserts and dishes. thanks.
29/06/2012 @ 11:16 am
u can get 10 pieces from that . yes you used brown sugar as well. i used 30 g of jaggery 🙂
30/06/2012 @ 12:05 am
Thank you very much Ei Thet.
30/06/2012 @ 9:14 am
welcome naw 🙂
cho mar htwe
16/07/2012 @ 3:58 pm
မမ ဆန်မှုန့်က အကျက်မှုန့်ပါလားရှင့်
17/07/2012 @ 7:09 pm
ညီမလေးရေ အစိမ်းမှုန့်ပါ 🙂
21/07/2012 @ 12:26 pm
22/07/2012 @ 12:13 am
22/07/2012 @ 4:11 pm
ဖောက်တဲ့အခါကျတော့ အဖုံးနဲ့လုံအောင်အုပ်ထား၇မလားမသိဘူးနော် ..
26/07/2012 @ 6:32 pm
23/07/2012 @ 10:49 am
Hi AMA what kind of rice flour did you use? Can I see the package? As I am also
in uk And I don,t know which one to buy from Indian shop
26/07/2012 @ 6:26 pm
sis i use normal rice flour . u can use any rice flour 🙂
26/07/2012 @ 7:04 pm
Moe Moe Swe
13/08/2012 @ 6:57 am
Hello Ma Ei Thet, what type of measuring cup did you use? If I’m not wrong, I think you are using the small plastic cup used for cooking rice. Thanksalot! Moe
15/08/2012 @ 1:04 am
small rice cup par 🙂
26/08/2012 @ 2:19 pm
Ma Ei Thet. Thanksalot for your generous and detail description of how to make this snack which is my husband’s favorite. Please tell me the cup you mention is typical measuring cup or the cup we used for rice cooking?
26/08/2012 @ 2:20 pm
Sorry, please disregard my question. I did not read all other comments. Thanks again. I will try it this weekend.
26/08/2012 @ 2:22 pm
I got another question, Ma Ei Thet yay, what type of banana do you use? I guess lady finger but if it’s not available, any type of banana will do?
Thank you again, I appreciate your time..
26/08/2012 @ 11:16 pm
sis , any type of banana you can use:)
12/10/2012 @ 9:02 am
15/10/2012 @ 9:18 am
almost same par ma yay 🙂
27/10/2012 @ 11:25 pm
Thanks. I added egg with self raising flour and baked in oven, it’s work.
28/10/2012 @ 12:12 am
happy to hear that:) thanks for let me know 🙂
28/07/2013 @ 8:53 am
How can I get hold of the recipe for this please Ma Eithet. Thanks
01/05/2014 @ 3:11 am
08/06/2015 @ 3:48 pm
အမရေ တစ်ခုလောက်မေးပါရစေ။ ဆော်ဒါကဘယ်လိုဟာမျိုးးဝယ်သုံးရမလဲ။baking powder ဆိုရင်ရောရပါလား။ ပြည်တွင်းမှာမဟုတ်လို့ပါ။ ရှာရတာအခေါ်အဝေါ်လဲသိပ်မသိလို့ပါ။ကျေးဇူးပါပဲ။
09/06/2015 @ 6:57 pm
yes, baking soda is good